Brandnew Internal iPhone Battery Pakutanga Maitiro ± 50mAh Replacement Battery ne 0 cycle
Tsanangudzo:iPhone Battery Pack,Internal iPhone Battery Pack,iPhone Battery 0 mhirizhonga,iPhone bateri replacement,iPhone yebhetri yakatanga simba,
Zvigadzirwa zve iPhone Battery , isu tiri vashandi vanobva kuChina, iPhone Battery Pack , Internal iPhone Battery Pack vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve iPhone Battery 0 mhirizhonga R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
OEM Yacho iPhone iPhone Battery Pack inonzi brandnew cell ne 0 cycle, bhokisi rekuchengetedza uye FPC yakafanana neyakasikwa 1: 1. Takapa iPhone Battery Replacement yakaitwa ne 100% pure Lithium cobalt oxide iyo inonzi AAA yakakwirira, yakasimba kwenguva refu kupfuura ternary. AOKAL ine zviitiko zvezvenyanzvi paPh imwe Tsika Bhatiri kwemakore mashanu, tinonyatsonzwisisa kuti ndeipi rudzi rweApple Battery Replacement rakasimba uye rakachengeteka. Isu tiri nyanzvi yekugadzira pa iPhone Battery chete!
iPhone Battery Tsanangudzo:
Recharge Cycle: 500-800 times
P ositive electrode: 100% pure Lithium cobalt oxide (LiCoO2 )
Integrated Dual IC chip chip protection
Anodzvinyirirwa, nokuda kwehupenyu hurefu
Anti-short circuit, kudzivirira data yako
Kushanda kushanda: 0-30 ℃
Bhatiri inopupurirwa kune zvinokonzera maitiro RoHS, CE, FCC, ISO9001
Mabhatiri aya ane zvakakosha zvakaenzana namabhatiri ekutanga
Mabhetiri anoenderana nezvikwangwani zvakafanana.
RoHS: Kurambidza kushandiswa kwemamwe zvinhu zvinokuvadza mumagetsi nemagetsi.
Izvi zvinotarisirwa kukonzera kushandiswa kwezvinhu 6 zvinokuvadza.
CE: European Conformity, Batteries inosangana neEuropean technikischanisms inorganisation standards. Iti mabheti akaiswa pasi pakugadzira uye kuongorora checks; Uye kusangana nezvinodiwa zvekodzero zvinodiwa zvakagadzwa neEurope Directive.
Kucherechedza kunobvumira kusununguka kusina mukati memusika weEurope.
Certificate yehutungamiri hwehutano hwakanaka.
ISO 9001 inowanikwa pasi rose, iyo inotsanangura zvinodikanwa zvehutano hwehutano hunoita kuti kuwedzerwa kugutsikana kwevatengi nekuvandudza kushanda kwekambani.
Kugamuchira OEM / ODM chirongwa, kubvuma kutanga kutanga kutangira kubva 100pcs. Kana uine mibvunzo, tapota usazeza kutaura nesu.iPhone bheteri inogadzirwa ne
iPhone Battery Pack Internal iPhone Battery Pack iPhone Battery 0 mhirizhonga iPhone bateri replacement iPhone yebhetri yakatanga simba iPhone 7 Battery Pack iPhone 6S Battery Pack